Homeबिबिधअनुगमनमा गएकाले एक दिनमै ८ छाक खाएको बिल पेश गरेपछि….
दोलखा । सामान्यतया मान्छेले दिनमा कति पटक खान सक्ला ? बढीमा ३ पटक । दोलखाको एक सरकारी कार्यालयका कर्मचारी भने दिनमा ८ छाक खाँदा रहेछन् ।
त्यस्तै, समन्वय समितिका कर्मचारी रविन पाण्डेले २०७७ असार २ र ३ गते कालिञ्चोक गाउँपालिकाअन्तर्गतका योजनाको अनुगमन गरेका थिए। उनले दुई दिनमा होटलका चार कोठा भाडामा लिए। १० छाक खाना खाएको बिल बनाए। त्यसबापत ७ हजार ८ सय भुक्तानी लिएका छन्। आलेप प्रतिवेदनले त्यसलाई अनियमित भनेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।